MB 2017 Noofambar, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
In kasta oo cafiska cajiibka ah ee Eebbe u leeyahay mid ka mid ah maaddooyinka aan jeclahay, haddana waa inaan qiraa inay ku adag tahay xitaa inaan garto sida dhabta ah. Bilowgii, Ilaah wuxuu u qorsheeyay hadiyad ahaan deeqsinimo leh, ficil qaali ah oo cafis iyo dib-u-heshiisiin lagu sameeyay wiilkiisa, oo ah dhamaadka dhimashadiisa iskutallaabta. Natiijo ahaan, ma nihin oo keliya in nala sii daayay, ayaa naloo soo celiyey - waxaa laynoogu keenay is-waafajin ku saabsan Ilaahayaga jacaylka leh.
Buuggiisa 'The At kafa: The Person and Work of Christ', TF Torrance wuxuu ku sharaxay sidan soo socota: “Waa inaan gacmaha isku qabsanaa afkeena sababta oo ah eray kama heli karno ereyada taas xitaa waxay u dhowaan kartaa macnaha guud ee xurmada u leh dib-u-heshiisiinta ». Wuxuu u arkaa sirta cafiska Eebbe inuu yahay shaqo abuuraha naxariis leh - waa shaqo aad u nadiif ah oo weyn oo aanan si buuxda u fahmi karin. Sida ku xusan Kitaabka Quduuska ah, ammaanta dembidhaafka Ilaah waxaa lagu muujiyaa barakooyin fara badan oo la xiriira. Aan kuu siino dulmar kooban oo ku saabsan hadiyadan nimcada leh.
Baahida loo qabo Ciise inuu iskutallaabta dusheeda ku dhinto dembiyadeena awgeed ayaa naga caawineysa inaan fahamno sida ugu daran ee Ilaah u arko dembiga iyo sida daran ee aan u arki karno dembiga iyo dembiga. Dembigeennu wuxuu soo saaraa awood baabi'isa wiilka Ilaah laftiisa oo baabi'iya masiixiga haddii ay awooddo. Dembigeennu wuxuu u baahan yahay faragalinta wiilka Ilaah inuu kaga adkaado masiibada ay keento; sidaas ayuu yeelay isagoo naftiisa na siiyey. Anagoo ah rumaystayaasha, uma aragno dhimashadii Ciise inuu ina cafiyo si la mid ah "wax la siiyay" ama "xaq" - waxay innaga horseedaysaa cibaado iyo is-caabudid Masiix, waxayna innaga horseedaysaa caqiidadii ugu horreysay ee aqbalaadda mahadcelinta iyo ugu dambeyntii inaan caabudno nolosheena oo dhan.
Cibaadada awgood Ciise aawadiis, waxaan leennahay is cafis guud. Taas macnaheedu waa in cadaalad-daradii oo dhan laga tirtiray garsooraha dhexdhexaad ah oo kaamil ah. Wax kasta oo qaldan waa la gartaa waana laga adkaadaa - oo la baabi'iyaa oo la hagaajiyaa badbaadadeenna oo kharashka Ilaah lagu bixiyo. Yaanan iska indho tirin xaqiiqda cajiibka ah. Cafiska Eebbe indho la'aantu ma aha mid indho la ' Waxba kama jiraan. Xumaan ayaa la qariyey oo la iska tuuraa waana laga badbaadiyey cawaaqib xumadiisii ​​oo waxaan helnay nolol cusub. Eebbe wuu ogyahay faahfaahin kasta oo ku saabsan dembiga iyo sida ay wax u yeellato abuurkiisa wanaagsan. Wuxuu ogyahay sida dembigu adiga iyo dadka aad jeceshahay u dhaawaco. Wuxuu sidoo kale eegayaa wixii hadda ka dambeeya oo wuxuu arkayaa sida dembigu u saameeyo oo u waxyeelleeyo jiilalka saddexaad iyo afraad (iyo wixii ka dambeeya!). Isagu waa garanayaa xoogga iyo qoto dheer ee dembiga; sidaa darteed wuxuu doonayaa inuu inagu fahmo tan oo aan ku raaxaysano xoogga iyo qoto dheer ee cafiskiisa.
Si aad noogu soo dirto aqoontan, Ciise wuxuu noo soo diray Ruuxa Quduuska ah. Ruuxa Quduuska ah waxaan ku ogaan karnaa jacaylka Aabbaha oo aan ku bilaabi karno ku noolaanshaha sida carruurtiisa uu jecel yahay. Qoraa warqad u ah Cibraaniyada ayaa ku nuuxnuuxsaday ka sarreeynta shaqada Ciise ee arrintan la xiriira: «Xafiiska Ciise wuxuu ka sara maray kan wadaaddadii axdiga hore, maxaa yeelay axdigii, dhexdhexaadiyaha uu isagu hadda yahay, wuu ka sarreeyaa kan hore maxaa yeelay waxaa la aasaasay Ballan qaadyada wanaagsan ... maxaa yeelay waxaan rabaa inaan ka raalli noqdo dembiyadooda, mana doonayo inaan dembiyadooda mar dambe soo xusuusto » (Cibraaniyada 8,6.12).
Wareysiga barnaamijkayaga Waxaa ku jira, wiilka adeerka TF Torrance, Robert Walker, wuxuu tilmaamay in caddeynta dembidhaafkeennu ay ahayd baabi'inta dembiga iyo dhimashada, taasoo lagu xaqiijiyay sarakicidda. Sarakiciddu waa dhacdo ugu xoog badan. Kaliya ma aha sarakicidda qof dhintay. Waa bilowga abuur cusub - bilowga cusboonaysiinta waqtiga iyo firaaqada ... Sarakiciddu waa cafis. Maaha oo keliya caddeynta cafiska, waa cafis, maxaa yeelay sida ku xusan Kitaabka Quduuska ah dembiga iyo dhimashada ayaa isla taga. Sidaa darteed, baabi'inta dembiga sidoo kale waxay ka dhigan tahay baabi'inta dhimashada. Tanina waxay ka dhigan tahay in Ilaah ku tirtiraa dembiga xagga sarakicidda. Qof baa laga soo sarakiciyay si dembiyadeenna looga soo qaado qabriga si ay sarakiciddayadu innaga u noqoto. Sidaa darteed Bawlos wuxuu qori karaa: "Laakiin haddii Masiixu uusan sara kicin, weli waxaad ku jiraan dembiyadiinna." ... Sarakiciddu maahan sarakicidda qof dhintay mooyaane; halkii, waxay ka dhigan tahay bilowga soo celinta wax walba.
Doorashadeenna ilaa badbaadada, jahwareerka da’da ah ee falsafadda ayaa dhammaaday - Ilaahay mid buu u diraa kuwa badan kuwa badanna waa lagu soo daray midka. Taasi waa sababta uu rasuul Bawlos u qoray Timoteyos: «Maxaa yeelay, waxaa jira Ilaah iyo dhex-dhexaadiye u dhexeeya Ilaah iyo dadka, oo ah ninka Ciise Masiix, oo naftiisii ​​dadka oo dhan furashadooda u bixiyey, oo maraggiisa u fura wakhtiga habboon. Waxaa laygu shaqeeyey sidii wacdiye iyo rasuul…, oo waxaan ahay macallin dadka aan Yuhuudda ahayn xagga rumaysadka iyo runta » (1 Timoteyos 2,5: 7).
Ciise Masiix qorshihiisii ​​reer binu Israa'iil iyo binu-aadmiga oo dhan way ku rumoobeen. Isagu waa aaminka aaminka ah ee ilaaha keliya, kan wadaadka boqortooyada, midda u badan, mid buu wax u yahay dhammaan! Ciise waa kan lagu gaadhey hadafkii Ilaah ee ah inuu nimco nimco dhaafo oo dadka weligiis ku noolaado lagu gaaro. Ilaah ma doorto mana doorto mid ka mid ah in la diido kuwa badan, laakiin sida habka loogu daro kuwo badan. Bulshada badbaadada Eebbe, doorashada micnaheedu maahan inay jirto diidmo cad. Waxa haddaba ah kiiska in sheegashada gaarka ah ee Ciise ay tahay in isaga oo keliya ay dadka oo dhan lala heshiin karo Ilaah. Fadlan la soco aayadahan soo socda ee Falimaha Rasuullada: "Mid kale badbaadada ma jiro, oo ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka loo bixiyey oo aannu ku badbaadi doonno" (Falimaha Rasuullada 4,12). Oo waxay noqon doontaa in ku alla kii magaca Rabbiga ku baryaa, waa badbaadi doonaa » (Falimaha Rasuullada 2,21).
Waxaan u maleynayaa inaad dhamaantiin isku raacsan tihiin inay muhiim utahay in qof walba maqlo warka wanaagsan ee cafiska Eebbe. Dadka oo dhami waxay u baahan yihiin inay ogaadaan inay la heshiiyaan Ilaah. Waxaa lagaa codsaday inaad ka jawaabto dibuheshiisiintan, oo lagu dhawaaqay wacdinta Ruuxa Quduuska ah ee ereyga Ilaah. Dadka oo dhami waa inay fahmaan in lagu casuumay inay helaan waxa Eebbe ku sameeyey. Waxaa sidoo kale lagu casuumay inay kaqaybqaataan shaqada Ilaah ee hadda jirta si ay ugu noolaadaan midnimo shaqsiyeed iyo wada noolaanshaha Ilaah ee Masiixa. Dadka oo dhami waa inay bartaan in Ciise, oo ah Wiilka Ilaah, uu noqday nin. Ciise wuu oofiyey qorshaha weligiis ah ee Eebbe. Wuxuu ina siiyay jacaylkiisa daahirka ah ee aan dhammaadka lahayn, wuxuu baabi'iyay dhimashada wuxuuna doonayaa inuu mar labaad nala sii joogo nolosha weligeed ah. Bini-aadamka oo dhami waxay u baahan yihiin farriinta injiilka maxaa yeelay, sida TF Torrence xustay, waa sir in “ay nala yaabiso si ka badan sidii hore aan loo sheegi karin”.